တံတားများ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Kartepe Summit-2019 သည်မြို့ပြနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောမြို့များကိုအာရုံစိုက်ပြီးအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ Kartepe ခရိုင်တွင်ကျင်းပသောထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် 'City and Transportation' ကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပါမောက္ခ Gebze နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ဒေါက်တာ Kocaeli မှ Mehmet Küçükmehmetoğlu [ပို ... ]
Eskişehir၏ဂုဏ်အသရေကိုအလှအပဖြည့်ဆည်းပေးသည့် Porsuk Stream ပေါ်ရှိတံတားများသည် Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ Eskişehir၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည့်တံတားများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ပန်းခြံ [ပို ... ]
Köprü ve otoyollardan kaçak geçişler cezasız kalmayacak. Sayıştay, 2018 yılında köprü ve otoyollarda gerçekleşen toplam 132 milyon 22 bin 276 TL kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydı yapılmadığını, söz [ပို ... ]
Bursa ကောင်တီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်မှုအတွက် unabated
Yenişehirခရိုင်သည်Söylemiş, Yolören, ÇeltikçiKarasılနှင့်Çardakköyရပ်ကွက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကို ဖြတ်၍ ဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသော်လည်း Bursa Metropolitan Municipality မှအသစ်ပြန်လည်တံတားပြိုကျခြင်းကြောင့်အလယ်၌ပြိုကျခဲ့သည်။ Bursa ၏အဓိကပြproblemနာ [ပို ... ]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Artvin’de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre kara yolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin’de yaklaşık [ပို ... ]
Malatya Kurtalan Arasında Köprü ve Menfezlerde Bakım Onarım Yapılması İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 5. Bölge Satınalma Müdürlüğünün (TCDD) 2019/277568 KİK numaralı, yaklaşık maliyeti 923.632,50 TL olan Malatya Kurtalan [ပို ... ]
Kocaeli Metropolitan Municipality သည်မြို့အနှံ့အပြားသို့လွယ်ကူအဆင်ပြေသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နေပါသည်။ နိုင်ငံသားများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်လမ်းအသစ်များသည်အသွားအလာစီးဆင်းမှုကိုအရှိန်မြှင့်စေသည် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya အတွက်သလဲသီးလက်ဝါးကပ်တိုင်တံတားနှင့် Culvert ကို Maintenance ဖျော်ဖြေ
Narlı – Malatya Arası Köprü Ve Menfezlerde Bakım Onarım Yapılması T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ Narlı – Malatya Arası Köprü Ve Menfezlerde Bakım Onarım Yapılması [ပို ... ]
အဆိုပါ Fatih Sultan Mehmet တံတားအတွက် Done လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlanan çalışmaların tamamlandığını söyledi. Turhan, “FSM Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmaları tamamlayıp bugün köprüyü [ပို ... ]
လှေငြိမ် Holder က Wall အဆိုပါတင်ဒါရလဒ်အတွက် Bridges နှင့် Culverts Making
Haydarpaşa Ankara Line Hasanbey - Sincan Stations ၏ကီလိုမီတာအမျိုးမျိုးရှိ Culverts နှင့် Bridges များတွင် Ballast Retainer Wall, Wing Wall နှင့်Pèreဖုံးအုပ်ခြင်းများတည်ဆောက်ခြင်း။ [ပို ... ]
Elektrik, çay, şeker ve doğalgazda santrallere yapılan zamlar, gözlerin köprü ve otoyollara çevrilmesine yol açtı. Devletin işlettiği 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollarda geçiş ücretlerine yıl sonuna [ပို ... ]
ပြန်လည်ဆန်းသစ်အကြားတွင်Çavuşluနှင့် Chirag တံတား
Ana arter ve ilçe merkezlerindeki ulaşım çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak projelere devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince [ပို ... ]